လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများ - Your Brain On Porn
ဤအပိုင်းတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့) ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများကိုကြည့်ပါ။
လိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆက်စပ်သည့်ပထမလေ့လာမှု (၆) ခုသည်နိမ့်ကျသောနှိုးဆော်ခြင်းကိုဖော်ပြသည် ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှု။ ပါဝင်သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးနာတာရှည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။
1) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်သောစာပေ၏ကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှု။7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောအဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ ဒါဟာအစကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှတဆင့်ညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများသုံးသပ်ပြီး။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။ ထိုသုံးဦးတို့သညျလူနှစ်ဦးက porn အသုံးပြုမှုဖျက်သိမ်းရေးနေဖြင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။ သူက porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါတတိယလူကိုအနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုခံစားခဲ့ရသညျ။
၏ဖော်ပြချက် ဝင်စွက်ခြင်း အဆိုပါ3ယောက်ျားများအတွက်:
ဆက်စပ်လေ့လာမှုများ, t ကိုအလုပ်မှာတိကျတဲ့ variable တွေကိုသီးခြားအတွက်အခက်အခဲလုပ်ဆောင်သွားရန်ပိုမိုလွယ်ကူနေမြဲနေစဉ်သူကအသက် ၄၀ နှစ်အောက်ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများမကြုံစဖူးမြင့်တက်လာခြင်းကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြားဆက်နွယ်မှုရှိ / မရှိဆိုတာကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ (အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည့်) တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ အောက်ပါလက်တွေ့အစီရင်ခံစာများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုပပျောက်ရန်မတူကွဲပြားသောနှင့်အခြားမဟုတ်သည့်နားမလည်နိုင်သည့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောလူနာများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုခွဲထုတ်ရန်မည်သို့ကူညီသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တက်ကြွသောစစ်မှုထမ်းသုံး ဦး အကြောင်းသတင်းပို့သည်။ နှစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ လိင်ဆန္ဒနည်းခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်အတူအော်ဂဇင်ရရှိစေရေးအတွက်မရှင်းလင်းသည့်အခက်အခဲများအတွက်ဆရာဝန်တစ် ဦး ကိုတွေ့ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတွင်အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အခြားကျန်းမာသောအမျိုးသားများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောအခက်အခဲများရှိနေခြင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်ခိုင်လုံသောစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများလိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အပြုအမူကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်အခက်အခဲများကိုတရား ၀ င်စစ်ဆေးခြင်းတွင်တိတိကျကျမဖော်ပြထားသောကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများက၎င်းတို့အားပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲလူနာများကိုအားနည်းချက်ဖြစ်စေသည်။
ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူနာများကိုမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမပါသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအထောက်အကူပြုသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုခွဲခြားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရိုးရာအစဉ်အလာအရလူနာများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါစိုက်ထူခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်းနှင့်အခက်အခဲမရှိသော်လည်း၊ လိင်ဆက်ဆံသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်ပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းတို့သည်အော်ဂဲနစ်မဟုတ်ဘဲအော်ဂဲနစ်ပြproblemsနာများရှိသည်ဟုယူဆကြသည်။ သို့သော်ငယ်ရွယ်သောလူနာများအနေဖြင့်သူတို့၏စွမ်းရည်များအကြောင်းမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” သည်“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏မိတ်ဖက်လိင်အခက်အခဲများသည်အမှန်တကယ်အင်တာနက်အပြာစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါ“ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်” ရှိခြင်းဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများထဲမှစမ်းသပ်နိုင်သောတစ်ခုမှာ“ လူနာသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမသုံးပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောစိုက်ထူမှု (နှင့်လိုချင်သည့်အတိုင်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်း) ကိုအောင်မြင်စွာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်၊ အကယ်၍ သူသည်၎င်းပန်းတိုင်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဖြင့်အလွယ်တကူမရနိုင်ပါကအလွယ်တကူအောင်မြင်နိုင်ပါကသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကို၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကောင်းဆက်စပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးမပြုပါကမှားယွင်းသောရောဂါလက္ခဏာပြမှုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးများညွှန်ကြားခြင်းနှင့် (နောက်ဆုံးတွင်ထိရောက်မှုမရှိသော phosphodiesterase-5 inhibitors) အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အခြားသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်အခက်အခဲများသည်ညအချိန်တွင်စိုက်ထူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းများကိုဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီinရိယာ၌အပိုဆောင်းသုတေသနမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
2) အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - ဤစာတမ်း၌သူ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia ကိုတီထွင်ခဲ့သည့်အမျိုးသား ၃၅ ယောက်နှင့်ပြန်လည်ရေးသားထားပြီးစာရေးသူ၏ကုသမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ။ စာရေးသူကသူ၏လူနာအများစုသည် porn ကိုသုံးကြသည်၊ အမျိုးသား ၃၅ ယောက်အနက် ၁၉ ယောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ခြင်းမှာသိသိသာသာတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ဆေးကုသမှုကိုမခံတော့ဘဲပြန်နေဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
မိတ်ဆက်ခြင်း: ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲယနေ့ဆက်နွယ်ကျယ်ပြန့်ကျင့်သုံးသည်သူ၏ထုံးစံအတိုင်း form မှာအန္တရာယ်ကင်းနှင့်ပင်အထောက်အကူဖြစ်စေ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်၎င်း၏အလွန်အကျွံနှင့် Pre-ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပုံစံ, လွန်းမကြာခဏကသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့အကဲဖြတ်အတွက်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်။
ရလဒ်များ: ညစ်ညမ်းဖို့ "နားမလည်" သူတို့ masturbatory အလေ့အထများနှင့်၎င်းတို့၏မကြာခဏဆက်စပ်စွဲမှကုသမှုပြီးနောက်, ဤလူနာတွေအတွက်ကနဦးရလဒ်များကို, အားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်ကတိပေးထားပါသည်။ ၃၅ ယောက်ထဲက ၁၉ ယောက်မှာရောဂါလက္ခဏာပြမှုလျော့နည်းသွားတယ်။ ကမောက်ကမဖြစ်မှုက regressed ဖြစ်ပြီးဒီလူနာတွေကကျေနပ်လောက်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။
ဆယ်ပါးဘာသာရပ်များ 25 ဘာသာရပ်များ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ coital anejaculation ရှိခဲ့ပါတယ်။5အမှုပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်မဖြစ်ပြသသည်ဤ၏, 8 လည်းညစ်ညမ်းစွဲနှင့် 8 လည်းလိင်စိတ်တစ်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ Biopsychosocial-Relational အကဲဖြတ်သည်အခြားအလားအလာသိသိသာသာ etiological အချက်များမတှေ့, ငါတို့သည်လည်းဖြစ်နိုင်သမျှညစ်ညမ်းစွဲကုသနှင့်သောအမှုရှိသောအခါ conjugopathy ရရှိလာတဲ့, ထိုရောဂါပျောက်ကင်း၏အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်စတိုင်မှစွဲလမ်းရွေးယူကြ၏။ စိတ်ဓာတ်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရပ်တန့်ခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့လုံ့လဝိရိယနှင့်ပိုပြီးတစ်နှစ်ဖြစ်ရပြီသောသူတို့အဘို့4လအတွင်းအကြားပြန့်နှံ့ကုသမှု၏ကြာချိန်။ ပြောင်းပြန်တဦးတည်းမှသုံးနှစ်ပေါင်းလိုအပ်သည်။ ကိုးလူနာသူတို့ရဲ့အေးစက်ထံမှ dis-habituated,3တိုးတက်မှုအတွက် 13 တက်ပေးပြီသို့မဟုတ်မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေကြသည်ခဲ့ကြသည်။
3) လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့် - porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (အနိမ့်လိင်စိတ်, fetishes, anorgasmia) နဲ့လူတပေါ်မှာဤစက္ကူအစီရင်ခံစာများတွင်4ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေ 6-ရက်သတ္တပတ် abstinence များအတွက်လို့ခေါ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ 8 လကြာပြီးတဲ့နောက်လူကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောင်မြင်သောလိင်နှင့်အော်ဂဇင်နှင့် "ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ် Chronicles ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအပါအဝင်စက္ကူထံမှကောက်နှုတ်ချက်,
"masturbatory အလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါ, သူကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းကြည့်နေစဉ်လွန်ခဲ့သည့်အတွက်သူပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်လျှင်မြန်စွာ masturbating ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ။ အဆိုပါညစ်ညမ်းမူလကအဓိကအား zoophilia, ကျွန်ခံ, လွှမ်းမိုးမှုကို, sadism နှင့် masochism ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်သူ နောက်ဆုံးမှာအဲဒီပစ္စည်းများနှင့်လိုအပ်ပိုပြီးအမာခံညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများမှ habituated တယ် လိင်ပြောင်းလိင်, orgies နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်အပါအဝငျ။ သူကအကြမ်းမဖက်လိင်အပြုအမူများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပေါ်တရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုနှငျ့အမြိုးသမီးနှင့်အတူလိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားမိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသူတို့မြင်ကွင်းများမြင်။ သူတဖြည်းဖြည်းမိမိအလိုဆန္ဒနှင့်အ fantasize ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့်သူ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေလျော့သွားသည်။ "
အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းငါ၏အမှုကနေယူပေါင်းစပ်အမှုပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောအမှု (လူနာ B က) နဲ့ကတင်ဆက်မှုအလားတူရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထှထှေကေုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထင်ဟပ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူနာ B ကိုသူထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် ejaculate နိုင်ခြင်းကြောင့်တင်ဆက်သူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူ 13 ခဲ့သောအခါသူမှန်မှန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုမှတဆင့်မိမိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသူ့ကိုစေလွှတ်သောလင့်များမှတဆင့်ဖြစ်စေညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူက image ကိုသူ့ဖုန်းကိုရှာဖွေနေစဉ်ညတိုင်း masturbating စတင် ... သူအိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ masturbate မပြုခဲ့ပါ။ ခက်ခဲပစ္စည်း (တရားမဝင်ဘာမျှ) သို့, (Hudson-Allez, 2010 ကိုကြည့်ပါ) ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း, ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့ ...
လူနာ B ကိုအီးခဲ့သည်12 ၏အသက်အရွယ်ကနေညစ်ညမ်းနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မှ xposed သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း 15 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကျွန်ခံခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သည်.
လူနာ B ကပဉ္စမ session တစ်ခုအားဖြင့်ထိုးဖောက်မှုမှတဆင့်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့သည်; အဆိုပါအစည်းအဝေးများတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကနေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ရက်သတ္တပတ်မှ session ကိုငါးခုညီမျှခြင်းဒါ Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံများတွင်နှစ်ပတ်တကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ သူပျော်ရွှင်အလွန်စိတ်သက်သာရာဖြစ်ခဲ့သည်။ လူနာ B ကိုအတူသုံးလနောက်ဆက်တွဲမှာတော့အမှုအရာနေဆဲကောင်းစွာသွားခဲ့ကြသည်။
လူနာ B ကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု (NHS) အတွင်းသီးခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး နှင့်အထွေထွေအတွင်းလူပျိုတို့ psychosexual ကုထုံးကိုရယူသုံးတကယ်တော့, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ, ပြောင်းလဲမှု၏နှိုးဆော်သူ့ဟာသူအတွက်ပြော၏။
ဤဆောင်းပါးသည်ထို့ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်နှင့်ဆက်စပ်မူကြောင်းကိုယခင်သုတေသနထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် DE နဲ့အတူလက်တွဲပြီး psychosexual ကုသ၏အောင်မြင်မှုများခဲအကြီးအကျယ်သွဇာအောကျရှိနေဆဲဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲတဲ့ရောဂါအဖြစ် DE များ၏မြင်ကွင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့သောပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေ, တှငျမှတျတမျးတငျထားသဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအားဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့သုတေသနနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါ desensitisation အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ဆောင်းပါးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု.
5) အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014) - အသေးစိတျ porn-သွေးဆောင် anejaculation တစ်ဦးအမှုထုတ်ဖေါ်။ သူ ejaculate နိုင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ - ကြိုတင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ခင်ပွန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့သည်။ သူလည်းညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်လျော့နည်း arousal အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်၏သော့အပိုင်းအစသည်သူ၏ anejaculation အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ပျက်ကွက် "Re-လေ့ကျင့်ရေးက" နှင့် psychotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားကြားဝင်ပျက်ကွက်သည့်အခါကုသ porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်မှာပြည့်စုံပိတ်ပင်မှုအကြံပြုသည်။ နောက်ဆုံးတော့ဒီတားမြစ်ချက်သည်သူ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါတနာတစ်နှင့်အတူအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်ဦးကလိင်ကွဲတိမ်းညွတ်နဲ့ 33 နှစ်အရွယ်လက်ထပ်အထီးတစ်အလယ်တန်းလူမှုစီးပွားမြို့ပြနောက်ခံကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကမျှမလွန်ကျူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မကြာခဏ masturbated။ လိင်နှင့်လိင်အကြောင်းကိုသိပ္ပံအတတ်တော်လုံလောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက်မစ္စတာတစ်ဦးပိုင်းတွင်ပုံမှန်အဖြစ်သူ၏လိင်စိတ်ဖော်ပြထားပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကသူ့ ejaculatory အခက်အခဲများမှအလယ်တန်းလျှော့ချ။ 30-45 မိနစ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုများရှိနေသော်လည်းသူနဲ့သူ့ဇနီးနှင့်အတူထိုးဖောက်မှုလိင်စဉ်အတွင်းအော်ဂဇင် ejaculate သို့မဟုတ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဤအတောအတွင်းမစ္စတာ A နှင့်သူ၏ဇနီး Assistant မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ (အေအာရ်တီ) နဲ့ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် Intrauterine သုက်နှစ်ခုသံသရာခံယူ။ တစ်ဦးအလေ့အကျင့် session တစ်ခုစဉ်အတွင်းမစ္စတာတစ်ဦးကသူသည်စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကတစ်အများစုစဉ်အတွင်းကျေနပ်ဖွယ် ejaculate နိုင်ခဲ့သည့်အောက်ဖော်ပြပါ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ejaculated ။
ဤစာတမ်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းစူးစမ်း ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြောင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြဿနာများအနက်အဓိပ္ပာယ် (PIED) ။ ဒီအခွအေနေကနေဆင်းရဲခံရသောယောက်ျားထံမှပင်ကိုယ်မူလဒေတာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ လိမ်းဘဝသမိုင်းနည်းလမ်း (အရည်အသွေးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအွန်လိုင်းဇာတ်ကြောင်းအင်တာဗျူးနှင့်အတူ) နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအွန်လိုင်းဒိုင်ယာရီ၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ်အသုံးချခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာကိုသရုပ်ခွဲသော induction အပေါ်အခြေခံပြီး, (McLuhan ရဲ့မီဒီယာသီအိုရီအရ) သီအိုရီစကားပြန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အင်ပါယာစုံစမ်းစစ်ဆေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် causation အကြံပြုကြောင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
တွေ့ရှိချက်များကိုဗီဒီယိုဒိုင်ယာရီနှစ်ခုနှင့်စာသားဒိုင်ယာရီသုံးခုနှင့်အတူအင်တာဗျူး ၁၁ ခုကိုအခြေခံသည်။ အမျိုးသားများသည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၅၂ နှစ်အတွင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း (များသောအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်) ကိုနေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ (ဥပမာအားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာ) ကိုနှိုးဆွမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်အထိသတင်းပို့သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည်အစွန်းရောက်။ အရှိန်အဟုန်မြင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သီးသန့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရေးပါသောအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါကလူတို့သညျညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်း,a"ကို re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စတင်ပေးသောအမှတ်တစ်ဦးကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များ။ ဒါကတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ဖို့ယောက်ျားအချို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူပြီးမှ, ငါအင်တာဗျူးအပေါငျးတို့သအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီဇာတ်ကြောင်းအောက်ပါအချို့ပုံစံများနှင့်ထပ်တလဲလဲ themes များသတိပြုမိပါပွီ။ ဤရွေ့ကားနေသောခေါင်းစဉ်: နိဒါန်း။ တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးအများအားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှီ, ညစ်ညမ်းစေရန်မိတ်ဆက်သည်။ တစ်ဦးအလေ့အထတည်ဆောက်ခြင်း။ တဦးတည်းပုံမှန်ညစ်ညမ်းလောင်မှစတင်ခဲ့သည်။ စက်လှေကား။ တစ်ခုမှာယခင်ညစ်ညမ်းနည်း "အစွန်းရောက်" ပုံစံများမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ညစ်ညမ်း, အကြောင်းအရာ-ပညာရှိပိုပြီး "အစွန်းရောက်" ပုံစံများကိုမှပြန်သွားလေ၏။ နားလည်. တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံရဖို့ယုံကြည်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြဿနာများသတိပွုမိ။ "Re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်ကို။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိသို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြန်လည်နိုင်ရန်အတွက်လုံးဝကပပျောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှအဆိုပါဒေတာကိုအထက်ပါအကြမ်းဖျင်းပေါ်အခြေခံပြီးတင်ပြနေကြပါတယ်။
Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇) - အသစ်စက်စက်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့နှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချ။ ဗီဒီယိုက porn အလုပ်သမားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့လုလင် 50% နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာသို့မဟုတ်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး နှင့် porn (ပျှမ်းမျှအသက် 29 ခဲ့သည်) ။ အဆိုပါတုန်လှုပ်သုတေသီများအမျိုးသား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ,
"အဆိုပါဘာသာရပ်များနှင့်အတူစကားစမြည်ထိုသူအချို့အတွက် erotica တစ်ဦးမြင့်မားသောထိတွေ့မှုအလွန်တိကျတဲ့များအတွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်အချို့ကိစ္စများတွင်, "vanilla လိင်" erotica နှင့်အသစ်အဆန်းများနှင့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုတိုးလာလိုအပ်ချက်တစ်ခုအောက်ပိုင်း Response အတွက်ရလဒ်ကြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအားဖြည့် နှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများ။ "
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည်သူ၏အထီးလူနာအချို့ကိုအပေါ်ရှိခြင်းခဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိဖွစျလာသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကရေးသားလေးလက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူဘက်စုံစက္ကူ, ။ အောက်ကကောက်နုတ်ချက်တစ် 31 တစ်နှစ်အစွန်းရောက် porn နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူကိုလူဟောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤသည်သည်းခံစိတ်, တင်းမာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှဦးဆောင် porn အသုံးပြုမှုကိုပုံဖော်ဖို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ရောနှောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပြanalytနာများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစိတ်ကိုကုထုံး၌အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ကသူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသူ၏လက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကနှိုးဆွရန်အခက်တွေ့နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး၊ သူတို့၏ဆက်ဆံရေး၊ ငုပ်လျှိုးနေသည့်ပconflictsိပက္ခများသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ခံရသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများစွာပြုလုပ်ပြီးနောက် (သူ၏တိုင်ကြားချက်အတွက်စိတ်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ရှင်းပြချက်မရရှိပါက) သူသည်စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုအပေါ်တွင်မှီခိုနေကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးစေကာသူသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖမ်းစားပြီးသူအကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည့်အင်တာနက်အပြာစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း၏“ မြင်ကွင်းတစ်ခု” ကိုသူဖော်ပြခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးအတော်များများတွင်သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသူအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ သူသည်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်များကတည်းကပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်လိင်မှုနှိုးဆွစေရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအပေါ်ပိုမိုမှီခိုအားထားခြင်း၏ရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်များပါဝင်သည်။ သူသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းတွင်မည်သည့်အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများ၏ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများအား“ သည်းခံနိုင်မှု” ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူမကြိုတင်လိုချင်သောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုရရှိနိုင်သောပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြခဲ့သည်။
သူလည်းသူကယခုသူတခါသုံးပြီးမစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ကြောင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းအားဖြင့်နှိုးဆွနိုင်မှတ်ချက်ပြု။ ဥပမာအားဖြင့်, သူလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကသူစအိုလိင်ဆက်ဆံ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုအတွက်နည်းနည်းအတိုးခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုကြသော်လည်းယခုကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုလှုံ့ဆော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင်သူကိုဆိုလိုသောသူအဖြစ်ဖော်ပြထားကြောင်းပစ္စည်း "edgier", "လုနီးပါးအကြမ်းဖက်သို့မဟုတ် coercive," ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုအဘယ်သူမျှမအကျိုးစီးပွားဖြစ်နှင့်ပင်ပယ်-ချပြီးခဲ့ဖူးသော်လည်းယခုသူ့ထံမှတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်းသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအသစ်ကိုဘာသာရပ်များအချို့နှင့်အတူသူနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပင်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မသက်မသာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခေါ်ဆောင်သွားသည့် latency ကာလအတွင်းမှာတော့ Disruption နှင့်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, အွန်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီး (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေး Exploring - "အောင်းနေချိန်ကာလ" (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စဉ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - လေ့လာလက်ရှိ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (SEM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း) အကြားဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏ပျမ်းမျှအသက် 22 ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်, အောင်းနေချိန်ကာလအတွင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူတစ်ပင်အားကောင်းဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
တွေ့ရှိချက်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ၏လမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်အောင်းနေချိန်ခေါ်ဆောင်သွားပြတ်တောက်အရွယ်ရောက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
ထို့အပွငျရလဒ်များကိုအောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်တဲ့သိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း - Porn အသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးအတွက်ယောက်ျားနဲ့အနုတ်လက္ခဏာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်တွင်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ porn ကိုအသုံးမပြုခဲ့သူစုံတွဲများအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုကနေအနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်ဦးတည်းသာမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဘယ်မှာစုံတွဲများအတွက်ကျနော်တို့ arousal နှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးပြဿနာများ (အထီး) ကိုတွေ့ နှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (အမျိုးသမီး) Self-အမြင်။
အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုမသုံးသောစုံတွဲများသည်လိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရိုးရာအစဉ်အလာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့တွင်မည်သည့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမရှိသည်မှာမထင်ခဲ့ပါ။
နှစ်ဦးစလုံးကဖော်ပြခဲ့သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု '' ခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတု '' function ကိုနှင့်အတန်ငယ်ကို '' 'အလုပ်မဖြစ်' 'function ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောတိုင်မှအပေါ်အပြုသဘောတိုင်မှအုပ်စုဖွဲ့တဲ့သူစုံတွဲများ။
ဆိုက်ဘာ-porn မှီခို: အီတလီအင်တာနက် Self-အကူအညီနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရောက်သောအသံ (2009) - ဤလေ့လာမှုသည်အီတလီ Cyberdependents (noallapornodipendenza) အတွက်အီတလီမှ Self-help အဖွဲ့ ၀ င် ၃၀၂ မှရေးသားထားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျ ၂၀၀၀ ကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းကိုတင်ပြသည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ် (၂၀၀၃-၂၀၀၇) မှသတင်းစကား ၄၀၀ ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်များ။
အတော်များများကအဖွဲ့ဝင်များ "လူသေလမ်းလျှောက်" ကဲ့သို့မိမိတို့၏အစစ်အမှန်ဘဝ ( "vivalavita" #5014) တွင် feeling, တိုးမြှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြား။ အောက်ပါဥပမာ ( "sul" #4411) သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင် concretizes ... ။
အတော်များများကသင်တန်းသားများကိုသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်တင်းမာမှုလွှတ်ပေးရန်အဆုံးစွန်, အစွန်းရောက် image ကိုစောင့်ဆိုင်း, ejaculate နိုင်ခြင်းမှာရှာဖွေနေနှင့်၎င်းတို့၏လက်၌မိမိတို့စိုက်ထူလိင်တံကိုကိုင်ပြီးဓါတ်ပုံတွေကိုနှင့်ရုပ်ရှင်စုဆောင်းနာရီပေါင်းများစွာဖော်ပြထားသည်။ အများသောသူတို့နောက်ဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်သူတို့ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း (supplizio) ( "incercadiliberta" #5026) အဆုံးသတ်ကိုထည့်လေ့မရှိ ...
လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးတွင်ပြဿနာများမကြာခဏထက်ပိုပါတယ်။ လူတွေကသူတို့စိုက်ထူပြဿနာများ, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိခြင်း, လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အတိုးမရှိခြင်း, ပူကိုစားခဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့တူခံစား, စပ်အစားအစာ, အကျိုးဆက်သာမန်အစားအသောက်မစားဘဲနေလို့ရပါတယ်ရှိတိုင်ကြား။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်လည်းဆိုက်ဘာမှီခို၏အိမ်ထောင်ဖက်များကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်, လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း ejaculate ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူအထီး orgasm ရောဂါ၏လက္ခဏာများရှိပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက် desensitization ၏ဤအသိကိုကောင်းစွာအောက်ပါကျမ်းပိုဒ် ( "vivaleiene" #6019) တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်:
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အမျှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြောဆိုချက်ကိုအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်ထံမှအများအပြားထောက်ခံစာများကသံယောင်နေသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း collusion နှင့်ညစ်ညမ်းပုံစံများကိုဤအဇာတ်လမ်းများထဲမှာပေါ်လာပါသည်။ ဤတွင်ထိုအမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမိတ်ဖက်များ၏အများဆုံးဒီကဗျာမှတ်ချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ် ...
အီတလီမိမိကိုယ်ကိုအကူအညီနဲ့အုပ်စုစေလွှတ်မက်ဆေ့ခ်ျအများစုဟာ, (အစစ်အမှန်ဘဝ၌) salience ၏မော်ဒယ်သည်နှင့်အညီ, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သည်းခံစိတ်, ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့လူ့ပဋိပက္ခထိုသင်တန်းသားများအားဖြင့် Griffiths ကကတီထွင်တဲ့ရောဂါရှာဖွေမော်ဒယ်ရောဂါဗေဒ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြကြဘူး (2004) ... ။
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - ကိုလောင် porn ၏ပမာဏနှင့်အတူ correlating3သိသိသာသာစွဲလမ်း-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရသည့်တစ်ဦးကမက်စ် Planck လေ့လာမှု။ ဒါဟာအစကိုပိုမိုညစ်ညမ်း vanilla porn မှထိတွေ့မှု (.530 ဒုတိယ) ရှင်းလင်းတုံ့ပြန်အတွက်လျော့နည်းဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုလောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး 2014 ဆောင်းပါးခဲရေးသားသူအတွက် ဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
"ကျနော်တို့ကမြင့်မားသောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များဆုလာဘ်၏တူညီသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိရန်တိုးပွားလာဆွလိုအပ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ အဲဒီညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှုထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တို့၏အကျိုးစနစ်ကထွက်ကျီကိုဆိုလိုနိုင်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာမိမိတို့အကျိုးကိုစနစ်များကြီးထွားလာဆွလိုအပျကွောငျးဿုံအဆိုပါယူဆချက် fit လိမ့်မယ်။ "
"ဒီကပိုနာရီသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်လက်ဝဲ putamen အတွက်သေးငယ်သည့် BOLD တုံ့ပြန်မှုစားသုံးအစီရင်ခံတင်ပြ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးနာရီညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရှိရသည့် ventral putamen သို့ရောက်ရှိလာပြီညာဘက် caudate ပိုမိုတိကျစွာသည် striatum အတွက်သေးငယ်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်လိုငွေပြမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ desensitization ပြီးနောက်သည်းခံစိတ်၏ရလဒ်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ "
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဒီ fMRI လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ာင်းထင်ဟပ်ပေးသောညစ်ညမ်းစွဲအတွက်ာင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစကြောင့်ညစ်ညမ်းစွဲကပိုက "" လို၏လက်ခံခဲ့သည်စွဲမော်ဒယ် fit ကိုတွေ့ပေမယ့် မဟုတ် ပိုပြီး "က" like နှိပ်။ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအခက်အခဲရရှိစိုက်ထူ / arousal ခဲ့: အဆိုပါသုတေသီများလည်းဘာသာရပ်များ၏ 60% (25 ပျှမ်းမျှအသက်) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ porn ကို အသုံးပြု. ၏ရလဒ်အဖြစ်သို့သော်လည်း, porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ လေ့လာမှုကနေ ( "CSB" compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်):
"CSB ဘာသာရပ်များ [သူတို့] (ပုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်ပေမယ့်မဟုတ်) မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးလျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုကြုံတွေ့ခံစား .. ... လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံ"
"ကျန်းမာတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များ သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုလိုသောခဲ့ရပြီးခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုပိုမိုအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့, အရှင်လိုသောနဲ့အကြိုက်အကြားတစ်ဦး dissociation ဆန္ဒပြနေသော။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများပိုမိုချို့ယွင်းခဲ့ပေမယ့်မပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရမှတ်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒယေဘူယျအဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုနှင့်မတိကျသောဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ "
မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015) - ဤအီတလီလေ့လာမှု urology ပါမောက္ခကပူးတွဲရေးသားအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် Non-စားသုံးသူအတွက် 16% နှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအ 0% (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းလောင်သောသူတို့အဘို့နှင့် 6%) ။ လေ့လာမှုမှ:
"21.9% ကအလားအလာအစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းစေသည်ဟုလေ့, 10% အစီရင်ခံစာနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသော, 9.1% အစီရင်ခံစာစွဲတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်သတ်မှတ်။ ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်စားသုံးသူအကြား 19% အထိမြင့်တက်နေချိန်မှာအပြင်, ခြုံငုံညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ 25.1%, တစ်မူမမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့ပါ။ "
115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ - ထိုသို့သော paraphilias, နာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်အဖြစ် hypersexuality မမှန်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု (ပျှမ်းမျှအသက် 41.5) ။ လူ 27 သူတို့ (ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ) masturbated အဓိပ္ပာယ် "ကိုရှောင်ကြဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ," တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီ, သို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုထက်ပို7နာရီအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ နာတာရှည် porn မှ masturbated သူယောက်ျား၏ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (porn-သွေးဆောင် ED ရန်ရှေ့ပြေး) နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယောက်ျားရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှပြန်လုပ် Exposure ။ တစ်ဦးကနယူးပြဿနာ? (2015) - ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2015) - နှင့်အတူ related ခံခဲ့ရပါတယ် porn မှ Masturbating လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရငျးနှီးလျော့နည်းသွားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
[2011 အတွက်] အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူကို [လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ] လူတို့တွင်, 26.1% သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လူတို့ 26.7% ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအနုတ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလိင်ထိခိုက်ကြောင်းအစီရင်ခံခြင်းနှင့် 21.1% ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းကြမှအခိုင်အမာ.
Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့်နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား Hypersexuality (2015) - စစ်တမ်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder) ၏အစီအမံအကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှု data တွေကိုချန်လှပ်ပေမယ့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှတ်ချက်ချသည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို - စစ်တမ်းကဒီမှာစာရင်းအများအပြားသည်အခြားလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိတဲ့ဘုံဆောင်ပုဒ်အစီရင်ခံ: Porn / လိင်စွဲဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရကိုကွောကျရှံ့) နဲ့ပေါင်းစပ် သာ. ကြီးမြတ် arousabilty (သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်မတရားသော) သတင်းပို့ပါ။
"Hypersexual" အပြုအမူသည်မိမိ၏လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ hypersexual အပြုအမူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနမူနာ ၅၁၀ မှလိင်တူချစ်သူ၊ ရိုးရိုးလိင်နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နမူနာသည်အမည်မသိသောအွန်လိုင်း Self- အစီရင်ခံစာမေးခွန်းလွှာဘက်ထရီကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ဒေတာ, ပိုမိုလွယ်ကူစွာလိင်စိတ်လှုပ်ရှား, hypersexual အပြုအမူအထီးအဘို့ပိုပြီးအဖြစ်များကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, အသက်အတွက်အသက်ငယ်ဖြစ်ခြင်းသတင်းပို့သောသူတို့အား ပိုပြီးလိင်ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှ inhibited, ဒီထက်လိင်ဘယျလိုမှကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုရန်, နှင့်ပိုပြီးထကြွလွယ်သော, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျ
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016) - တစ်ဦးဦးဆောင်သုတေသနပြုတက္ကသိုလ်ကနေဒီဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှော့ erectile function ကိုနှင့်လျှော့ချခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်မတရားသောခံစားခဲ့ရသညျ။ အဆိုပါလေ့လာမှုက "လူတို့သညျရှုမွငျကွ porn ၏ 49% အဖြစ်တင်းမာမှုအစီရင်ခံရန်ပုံပေါ်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ "(ကိုကြည့်ပါ လေ့လာမှုတွေ ) porn အသုံးပြုမှု porn နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့လေ့ / desensitization သတင်းပို့ကောက်နုတ်ချက်:
"ဒီလေ့လာမှုကိုတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့် OSAs အတွက်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုပြဿနာ OSAs (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ။
ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016) - များစွာသောအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူအမျှတိုက်ပိတ် porn အသုံးပြုသူများကဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသတင်းပို့ပါ။ အဆိုပါအလုပ်သမား ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES), လေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား porn အသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်တစ်ဦး "ပိုဆိုးလိင်ဘဝ" နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "လိင်ဘဝက" မေးခွန်းတွေနဲ့ porn အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအပေါ် PCES "အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ" အကြားဆက်စပ်မှုဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြတ်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု Dimension PCES အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြ၏ သို့သော်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ အမြင့်ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများအနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများထက် သာ. ကြီးမြတ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရှိရာလိင်အသက်ကို subscale ပေါ်မှာ။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား Associative လမ်းကြောင်း (2017) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ပေမယ့်, ကလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေတစ် preference ကိုဆက်စပ်သောခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံ (သို့မဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်?) လိင်စိတ်နိုးထအောင်မြင်ရန်လူမျိုးကိုစိုး porn သည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းကိုလည်းတိုက်ရိုက်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဆွေမျိုး preference ကိုဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားပူးပေါင်း။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူအဓိကအားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းလောင်လေ၏။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤတွေ့ရှိချက်တစ်ခု masturbatory အေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (; Malamuth, 1994; Wright, 1981 Cline, 2011) ၏ညွှန်ပြဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခု arousal tool ကိုအသုံးပြုသည်လိင်စိတ်နိုးထ၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ပိုပြီးတစ်ဦးချင်းညစ်ညမ်းမှ conditional ဖြစ်လာပေမည်။
"ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိသြစတြေးလျလူမျိုးတို့၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသူများ (n = ၈၅၆) ကို 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကသင့်ဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သလဲ' ဟူသောအဖွင့်မေးခွန်းဖြင့်မေးခဲ့သည်။
လုလင်တို့သည် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic အကြောင်းတရားများ - "နှောင့်နှေးသုက် (DE) တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏အခန်းက္ပ" ဟုခေါ်နေတဲ့အပိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤအပိုင်းကိုတစ်ဦးထံမှကောက်နုတ်ချက်:
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများပျံ့နှံ့မှုနှင့်သုံးစွဲမှုများပြားလာခြင်းသည် Althof ၏ဒုတိယနှင့်တတိယသီအိုရီနှင့်ဆက်စပ်သော DE အကြောင်းတရားများကိုတိုးပွားစေသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ယောက်ျားလေးများ၏ ၁၄.၄% သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏အစီရင်ခံစာများသည် ၁၃ နှစ်နှင့် ၅.၂% သည်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည် ။2008 ၂၀၁၆ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဤတန်ဖိုးများသည် ၄၈.၇% နှင့် ၁၃.၂% အသီးသီးအထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 14.4 အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် DE ကို CSB ကိုပြသသောလူနာများနှင့်ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့်အထောက်အကူပြုသည်။
Voon et al ။ CSB ရှိလူငယ်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုအသက်အရွယ်အလိုက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အသက်အရွယ်အရွယ်ရှိသည့်သက်တူရွယ်တူများထံမှကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည် ။75 အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CSB ရှိလူငယ်များသည် Althof ၏တတိယမြောက် DE သီအိုရီ၏သားကောင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ဆက်ဆံရေးအတွက်နှိုးဆွမှုမရှိခြင်း။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသည့်အမျိုးသားအရေအတွက်သည် Althof ၏တတိယသီအိုရီအားဖြင့် DE ကိုအထောက်အကူပြုသည်။
အထီးကောလိပ်ကျောင်းသား ၄၈၇ ယောက်ရဲ့လေ့လာမှုမှာ Sun et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဘဝမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများလျော့နည်းလာခြင်းမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ခံစားမှုအကြားဆက်စပ်မှုများတွေ့ရှိရသည်.487ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်း၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိ ။ အသက် (၂၀) ​​အရွယ်ရှိယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည်ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လကသူ၏စေ့စပ်ထားသူနှင့်အော်ဂဇင်ရရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ အသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်ကဖော်ပြသည်မှာလူနာသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပြီးလိင်အင်္ဂါကိုအသုံးချပြီးလိင်အင်္ဂါမှတစ်ဆင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိင်အင်္ဂါမှူအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအော်ဂဇင်အတွက်ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္orာန်နှင့်သရုပ်သဏ္natureာန်တူသောသဘောသဘာဝကိုလိုအပ်လာခဲ့သည်။ သူကသူ၏စေ့စပ်မှုကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းသူဝန်ခံခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်သူသည်ကစားစရာ၏ခံစားချက်ကိုပိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်လူငယ်များသည် Althof ၏ဒုတိယသီအိုရီအားဖြင့် DE ကိုတီထွင်ရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ Bronner et al ။ သူမသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းသူ၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်မရှိကြောင်းတိုင်ကြားမှုများကိုတင်ပြသည့်အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ကျန်းမာသူတစ် ဦး ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ အသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်ကဒီအဖြစ်အပျက်ဟာသူချိန်းတွေ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်လွန်ခဲ့သောအမျိုးသမီး ၂၀ နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်အစပိုင်းတွင် zoophilia၊ အချုပ်အနှောင်၊ sadism နှင့် masochism တို့ပါဝင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်လိင်၊ လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်များသို့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သူသည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်သူ၏စိတ်ကူးဖြင့်ညစ်ညမ်းသောမြင်ကွင်းများကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်သွားသည် ။35
လူနာ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ များအကြားကွာဟချက်သည်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်လိုချင်တောင့်တမှုလျော့နည်းသွားသည်။ Althof ၏အဆိုအရ၎င်းသည်အချို့သောလူနာများတွင် DE အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည် ။73 ဤထပ်ခါတလဲလဲပုံသဏ္graphicာန်သည်ပုံရိပ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကိုပိုမိုဆိုးရွားလာစေမည့်အော်ဂဇင်ကို Park et al မှသတ်မှတ်သည်။ အဖြစ် hyperactivity။ လူတညစ်ညမ်းအားမိမိလိင်စိတ်နိုးထ sensitizes အမျှအမှန်တကယ်အသက်တာ၌လိင်မရှိတော့ ejaculate (သို့မဟုတ် ED ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်) အားလျော်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင် .77
အင်တာနက်ကိုခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ငယ်ရွယ်သောလူ ဦး ရေတွင်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကျေနပ်အားရမှုနည်းခြင်း၊ ၂၀၁၃ မှအီတလီလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ED မှခံစားနေရသော ၂၅% အထိအသက် ၄၀ နှစ်အောက်  နှင့် ၂၀၁၄ တွင်ထုတ်ဝေသည့်အလားတူလေ့လာမှုတွင်ကနေဒါမှ ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများ၏ထက်ဝက်ကျော် အချို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အော်ဂဲနစ် ED နှင့်ဆက်စပ်သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်ဘဝပုံစံများပျံ့နှံ့မှုသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ (သို့) လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိသောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED သည်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ 
DSM-IV-TR သည်အချို့သောအပြုအမူများကိုလောင်းကစားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းစသည့် hedonic အရည်အသွေးများနှင့်အချို့သောအပြုအမူများကို“ အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော Impulse Control Disorders” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ] ။ မကြာသေးမှီကစုံစမ်းစစ်ဆေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်အမူအကျင့်စွဲ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြုထားပါတယ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် neurobiological လမ်းကြောင်းမြားတှငျပွောငျးလဲအမျိုးမျိုးသောဇစ်မြစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲ, supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
စာပေမှာတော့သုတေသီများအပြုသဘောအကြောင်းကိုစိတ်တိုးပွားဖြစ်ကြပြီး အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာ function ကို. ဆိုးကျိုးရှုထောင့်ကနေ, ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော masturbatory အပြုအမူ, ဘာစွဲနှင့်ပင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအကြောင်းမရှိကိုယ်စားပြုတယ်။
Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား? Cross-Section နှင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း "(2019) မှစ. ရလဒ်များ
အဆိုပါ Grubbs စက္ကူတသမတ်တည်းမြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားဆက်စပ်မှု downplays ဆက်စပ်မှုနေစဉ် ခဲ့ကြ အထူးသဖြင့်နမူနာ3ဘို့ကအကြီးဆုံးနမူနာကြီးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဆင့်မြင့်ပျမ်းမျှအဖြစ်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာနမူနာခဲ့ပြီးသော - အားလုံး3အုပ်စုများအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဒီနမူနာရဲ့အသက်အပိုင်းအခြား PIED အစီရင်ခံရန်အရှိဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင့်လုံလောက်သော3porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့် (-0.37) functioning ဆင်းရဲတဲ့ erectile အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်က3အုပ်စုများ porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှု erectile လည်ပတ်ငွေပမာဏအကြားဆက်စပ်မှုသူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှအားနေ့စဉ်မိနစ်နှင့်အတူနေသောခေါင်းစဉ်:
နမူနာ 1 (147 ယောက်ျား): ပျှမ်းမျှအသက် 19.8 - porn / နေ့၏ 22 မိနစ်ပျမ်းမျှ။ (-0.18)
နမူနာ2(297 ယောက်ျား): ပျှမ်းမျှအသက် 46.5 - porn / နေ့၏ 13 မိနစ်ပျမ်းမျှ။ (-0.05)
နမူနာ3(433 ယောက်ျား): ပျှမ်းမျှအသက် 33.5 - porn / နေ့၏ 45 မိနစ်ပျမ်းမျှ။ (-0.37)
မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ရလဒ်များကို: အနည်းဆုံးအသုံးပြုအုပ်စု (#3) သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားအနည်းဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့စဉ်အရှိဆုံး porn (#2) အသုံးပြုခဲ့တဲ့နမူနာပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Grubbs လည်း erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ porn စွဲရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ရလဒ် porn စွဲကြီးပင်အတော်လေးကျန်းမာ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ထုတ်ဖေါ် သိသိသာသာ ဆက်စပ်သော ဆင်းရဲတဲ့ စိုက်ထူ (-0.20 မှ -0.33) ။ ယခင်ကဲ့သို့ပင်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်းရဲသောစိုက်ထူမှုများ (-0.33) အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်စပ်မှုသည် Grubbs ၏အကြီးမားဆုံးနမူနာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအသက်အရွယ် - ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါကူးစက်ရန်နမူနာအများဆုံးနမူနာ - နမူနာ ၃၊ ပျမ်းမျှအသက် - ၃၃.၅ (ဘာသာရပ် ၄၃၃ ခု) ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း (2019) - ဤလေ့လာမှု၌, သုတေသီများမှာ "တဏှာ" မေးခွန်းလွှာသုံးပြီး ED နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ညွှန်းကိန်းများအကြား link တစ်ခုအဘို့အကြည့်ရှုကြ၏။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သော link ကို (သူတို့သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသည်အထိအသုံးပြုသူများကိုတိကျစွာ "တဏှာ" ၏၎င်းတို့၏ဘွဲ့အကဲဖြတ်ရန်ပါဘူးဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ဖွင့်လှည့်နေစဉ်, တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဆက်စပ်မှု၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုအတွက်ထင်ရှား။ , ကောက်နှုတ်ချက်:
...PIED ၏အဆိုပြုထားသောဇီဝကမ္မဗေဒသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းသည်သုတေသီများစွာ၏အလုပ်အပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူအမျိုးသားများ၏အစီရင်ခံစာများသည်လည်းအငြင်းပွားမှု၏“ အကြောင်းရင်း” ကိုထောက်ခံသည်။
...အလားအလာရှိသောလေ့လာမှုများသာလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသူများတွင် ED ကိုကုသခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်ကြား ၀ င်လေ့လာမှုများအပါအ ၀ င်ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ်မှုဖြစ်စေပြsolveနာကိုသေချာစွာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားခိုင်လုံသောနောက်ထပ်လူဦးရေမြီးကောင်ပေါက်ပါဝင်သည်။ ဂရပ်ဖစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းစောစောထိတွေ့မှုပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါထမြောက်တော်မူစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့သည်။ 13 များ၏အသက်အရွယ်မတိုင်မီညစ်ညမ်းထိတွေ့ခံရခြင်းဆယ်ကျော်သက်နှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသုံးခြံကိုတက်သွားပြီ, အခု 50% ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်သိရသည်။
သစ်ခမည်းတော်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်နီးစပ်ခြင်းကိစ္စများ (2018) - ခေါင်းစဉ်သစ်တစ်ခုဆေးဘက်ကျောင်းစာအုပ်ထဲကနေဒီအခန်း အဖေဘက်က Postnatal စိတ်ရောဂါရောဂါ ဖခင်အသစ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ဒါ စာမျက်နှာသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်၏ screenshots များပါရှိသည် အခန်းကနေ။
ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019) အကြီးစားလေ့လာမှု (n = ၆၄၆၃) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကောလိပ်ကျောင်းသားများ (အလယ်အလတ်အသက် ၂၂ နှစ်) တွင်လိင်အရစွဲလမ်းမှုမြင့်မားခြင်း (၁၅%)၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်)၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများကိုတင်ပြသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ဆွီဒင် 2017 (2019) တွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများ - အဆိုပါဆွီဒင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကတစ်ဦးက 2017 စစ်တမ်းညစ်ညမ်းအပေါ်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းအပိုင်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်ရာ, သာ. ကြီးမြတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆက်စပ်ခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
သူတို့တစ်တွေနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်းလောင်ဆိုလိုသည်မှာ 16 မှ 29 အသက်ယောက်ျား၏လေးဆယ်တစ်ရာခိုင်နှုန်း, ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ အမြိုးသမီးမြားအကြားသက်ဆိုင်ရာရာခိုင်နှုန်းကို3ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလည်းမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, နှင့်အရောင်းအဝယ်လိင်နဲ့အသင်းအဖွဲ့, တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်လည်းမြင့်မားတဲ့မျှော်မှန်းချက်များနှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်မှုများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပြသပါ။ အဲဒါကိုသာသက်ရောက်သည်သို့မဟုတ်မပါလျှင်တတိယမသိရပါဘူးနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေတော်မမူကြောင်းလူဦးရေသည်ပြည်နယ်များ၏ထက်ဝက်ခန့်မှာ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာပုံမှန်နိမ့်ပညာရေးနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အတူလူတို့တွင်ပိုပြီးအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။
"စိတ်ဓာတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာနိဒါန်း (2019)" မှအခန်း၏ PDF နှင့်ချိတ်ဆက် - အဖြူ, ကက်သရင်း။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်း - စွဲခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာမိတ်ဆက်ခြင်း (၂၀၁၀၉)